Hetsika ara-pahasalamana – CUA: hotilina diabeta sy tosidra ny mponin’Ambohimanarina - ewa.mg
News - Hetsika ara-pahasalamana – CUA: hotilina diabeta sy tosidra ny mponin’Ambohimanarina
Hitohy anio eny Ambohimanarina,
boriborintany fahenina hatramin’ny 30 oktobra izao ny hetsika sy
tolotra ho an’ny fahasalamanana maimaim-poana ny eo anivon’ny
kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Nifarana, omaly ny teny
amin’ny fokontany Soavimasoandro ary niarahana amin’ny sampana
sosialy eo anivon’ny fiadidiana ny Tanàna.
Fidinana ifotony eo amin’ny
Tanjona ny fidinana ifotony,
fanatonana ny mponina eo amin’ny sehatry ny fahasalamana. Nahitana
trano heva maromaro teny an-toerana, nidinan’ny ekipan’ny CSB II
sy ny kaominina. Teo koa ny fanasana ireo mpisehatra maro
mpiara-miombon’antoka misahana ny fahasalamana sy sosialy nandray
anjara. Anisan’izany ny fijerena sy fitiliana diabeta sy ny
fiakarana tosidra, ny fitiliana VIH/SIDA, ny fizaham-pahasalamana
Mihaino ireo vehivavy
iharan’ny herisetra koa ny polisy
ity hetsika ity ny fandraisan’anjaran’ny avy eo anivon’ny
Polisim-pirenena nanentana ny ankizy tsy ampy taona sy ireo
vehivavy iharan’ny herisetra mba hanatona azy ireo. Manampy izany
ny fampirantiana ireo fanafody vita amin’ny akora natoraly ary ny
trano heva mampahafantatra ireo mponina ny torolalana sosialy.
Niara-niasa amin’ny CUA tamin’izany
ny AIMF, ny « Ville de Paris » ary ny
« ISSV ».
L’article Hetsika ara-pahasalamana – CUA: hotilina diabeta sy tosidra ny mponin’Ambohimanarina a été récupéré chez Newsmada.
Tsy hahakasika an’i Madagasikara i Kenneth. Araka ny nohamafisin’ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro, nitombo hery ary lasa « forte tempête tropicale » ilay andro ratsy Kenneth, omaly. Tany amin’ny 418 km tany avaratra andrefan’Antsiranana ny nisy ny foibeny, omaly maraina. Nizotra nianandrefana ny lalany ka nahatratra 20 km isan’ora ny hafainganam-pandehany.Tsy nisy filazana loza momba ity rivodoza ity ho antsika, hatramin’ny omaly. Mampitandrina ny mpampiasa ranomasina, eo anelanelan’ny Cap d’Ambre sy i Mahajanga, anefa ny Meteo. Mety hahery ny rivotra amin’io faritra io.Araka ny tombana, ho lasa « cyclone tropical » i Kenneth, anio ary manambana ny Nosy Kaomoro ary mety hiditra an-tanety any avaratr’i Mozambika ity rivodoza ity. L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Fanomanan-tena: mety hisy mpilalao vaovao hantsoina handrafitra ny Barea
Mitsitaitaika ny fahatongavan’ireo mpilalaon’ny Barea, mamonjy ny fampivondronana voalohany, hiatrehana ny lalao fanomanana hiadian-toerana amin’ny Can 2022. Araka ny vaovao, mety hisy mpilalao vaovao ho avy.Raha ny tokony ho izy, efa nanomboka omaly alatsinainy ny fanomanantenan’ny Barea de Madagascar, saingy tsy mbola feno tanteraka ireo mpilalao mandrafitra ny ekipam-pirenena, Anio vao tena ho raikitra izany. Omaly alatsinainy mantsy vao namonjy an’i Luxembourg, ireo mpilalao mipetraka ivelan’i Frantsa. Anisan’izany i Bapasy avy atsy La Réunion sy i Paulin avy any Egypta.Eo koa nefa ireo mpilalao sasany izay mbola niatrika ny fifaninanana tao amin’ny kliobany, ny faran’ny herinandro lasa teo, toa an-dRamalingom sy i Hery Bastien, Torak’izany koa ireo ao Frantsa, toa an-dry Bolida sy i Morel ary i Thomas Fontaine sy ny hafa. Ankoatra izay, fantatra fa mety hisy mpilalao vaovao hantsoin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra hanatevina ny Barea de Madagascar.Hatreto anefa, tsy mbola misy anarana nolazainy fa efa nisy kosa ny fifampiresahana mahakasika izany. Araka izay efa notaterina teto ihany ny antony tsy fahafahan’ireo mpilalao tompon-toerana, toa an’i Romain Metanire sy i Ibrahim Amada ary i Carolus, izay vao nifindra klioba ao amin’ny Al Qadsiah Al-Khubar FC, ao Arabia Saodita. Eo koa i Abel Anicet, kapiteny maratra ary i Jerome Mombris, tratry ny aretina Covid 19.Tsiahivina fa sady fiofanana no hiatrehana ireo lalao firahalahiana roa ity atao any Luxembourg, nanomboka omaly alatsinainy ity, dia ny fikatrohana amin’ny Swift Hesperange, ny zoma 9 oktobra ho avy izao sy ny fifandonana amin’ny Etalons-n’i Borkina Faso, ny alatsinainy 12 oktobra any Maraoka.Marihina fa fanomanantenan’ny Barea, amin’ny fihaonana amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, eo amin’ny fifanintsanana ny Can 2022, izy ity. Lalao mandroso hatao any Abidjan, ny 9 novambra ary ny fihaonana miverina any amin’ny kianja Barikadimy, ny 17 novambra ho avy izao. TompondakaL’article Kitra – Fanomanan-tena: mety hisy mpilalao vaovao hantsoina handrafitra ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Tambajotrana mpanafika – RN 2: voasambotry ny zandary ry Zafinady sy Rigobert
Niverina indray, efa ho volana vitsivitsy izay ny fanafihana kaomiaobe mitondra entana sy ireo taksiborosy eny amin’ny RN 2 tato ho ato. Efa betsaka rahateo ireo nametraka fitarainana amin’ny fahaverezana entana vokatr’ity fanafihana ity teny amin’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena ao Brickaville. Mitovitovy avokoa ny voalazan’ny fitarainana fa saika eo anelanelan’i Brickaville sy Bekalalao izay somary misy fiakarana sy fiolahana no hitrangan’ny fanafihana. Faharoa voasoratra ao anatin’ny fitarainana koa ny eo anelanelan’ny tetezam-by ao Brickaville sy Ambodipolomosy izay fiakarana ihany koa ary misy lalan-dratsy ka tsy afa-mandeha mafy ny fiara amin’ireo faritra roa ireo ka eo ny manararaotra manao ny asa ratsiny ireo olon-dratsy mihanika ny kamiaobe ka manapaka ny hidin’ny kaontenera. Toy izany koa ny mahazo ireo taksiborosy satria tafakatra eny ambony tafo ry zalahy maka ny entan’ny mpandeha. Vokany, nandray ny andraikiny avy hatrany ny zandary ka nametraka ny vela-pandrika mba hahafahana misambotra ireo olon-dratsy. Nambaran’ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimariam-pirenena Atsinanana, ny Kly Ranaivoarison Théodule fa matory any anaty ala maizina mihitsy amin’ireo faritra voalaza ireo ny zandary miandry izay mety hisian’ny halatra sy fanafihana fiara. Nahitam-bokany izany, ny herinandro teo fa tratra teo am-pianihana kamiaobe ireo jiolahy ka raikitra ny fifanenjehana. Nandositra niditra tany anaty ala ireo jiolahy tsy latsaky ny enina, araka ny fanazavany hatrany. Tsy nijanona teo ny zandary fa nanao ny fikarohana ka tonga hatrany amin’ny tanàna kely antsoina hoe Ambalambe Analankininina fokontany Vohimarina, 15 km mandeha avy eo Brickaville. Niainga tamina ranom-boankazo very ny zandary ka niafara tamin’ny fahitana seza salon complet, panneau solaire, friperie telo fonosana, moto jog 50 iray, voanjo 50 kg.SajoL’article Tambajotrana mpanafika – RN 2: voasambotry ny zandary ry Zafinady sy Rigobert a été récupéré chez Newsmada.
Tetikasa andrana: EPP 93 nizarana mofo
Fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina. Nanomboka amin’ny EPP miisa 93 ahitana mpianatra 8 669 ny fanomezana mofo amin-dronono ho an’ireo ankizy, hiatrika fanadinana 7e. « Natao andrana aloha izany, iarahana amin’ny sehatra tsy miankina. Mbola ezahina itarina amin’ny EPP hafa », hoy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Andriamanana Rijasoa, omaly teny Tanjombato. Nidina ifotony nijery ny fidiran’ny mpianatra teny an-toerana ny tenany. Nisy ny fampahatsiahivana ny fepetra rehetra tamin’izany amin’izao fiatrehana ny Coronavirus izao. Eo ny tsy maintsy anaovan’ny mpianatra arom-bava. Ny fisian’ny toerana fanasana tanana miaraka amin’ny savony. Ny fanajana ny elanelana iray metatra ary koa ny fanomezana tambavy CVO azy ireo.Momba ny fotoana hanatanterahana ny fanadinam-panjakana kosa, nambaran’ny minisitra fa tsy mbola any aloha izao ny resaka. “Hotanterahina amin’ny fotoana milamina fa tsy ho amin’izao fotoan’ny valanaretina izao. Miankina amin’ny filoham-pirenena izany”, hoy ihany izy.Synèse R.L’article Tetikasa andrana: EPP 93 nizarana mofo a été récupéré chez Newsmada.
Minisitra Lalatiana Andriantongarivo: « Dimy taona no nifanomezana… tsy maintsy vita i Miami »
Nitondra fanazavana momba ny raharaham-pirenena ny mpitondra tenin’ny governemanta sady minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Andriantongarivo ny faran’ny herinandro teo tao Toamasina. Voaresaka tamin’izany ireo lafin-javatra maromaro.Anisan’ny nambarany fa dimy taona no nifanarahana amin’ny fitantanana ny firenena. « Tazony amin’ny teniko aho raha tsy vita ao anatin’izany i Miami. Fantatro ny filoham-pirenena fa mitana ny teny nomena. Resaka tetinandro io. Tsy midika izany fa tsy atao ny fanajariana ny sisin-dranomasina mba hitovy amin’ny fivoaran’ny any ivelany », hoy izy. Nanteriny fa mahafinaritra amin’ity fitondrana ity ny fandrabirabian’ny sasany saingy avadiky ny mpitondra ho vato lasa fehizoro izany. « Misy ny demokrasia eto amintsika matoa afaka miteny sy manakiana momba izany izy ireo », hoy ihany izy.Nanteriny fa mitondra fanazavana ny tenany noho ny adidy amin’ny tamberin’andraikitra sy amin’ny maha mpitondra tenin’ny governemanta azy sady minisitry ny Serasera. Nambarany fa miasa sy mihazakazaka ny mpitondra sy ny filoha mankatsy sy aroa. « Misy kosa anefa ny fotoana itondrana fanazavana manoloana ny tenin’ireo mpamendrofendro, tsy manao na inona na inona … », hoy ihany izy.Orinasan’ny filoha teo aloha, ao ToamasinaNovaliny tamin’izany ny filazana ho diso paikady hatrany am-boalohany ny fanjakana, manoloana ny fihanaky ny covid-19. Nohitsiny anefa fa nisy hatrany ireo fepetra samihafa noraisina, nanomboka ny volana febroary. Teo koa ny nilazany fa tsy nanao ny fifidianana teny anivon’ny faritra sy ny faritany ny fitondrana teo aloha nefa tokony ho nanatanteraka izany izy ireo.Etsy andaniny, notsikerainy ny fomba fitantanan’ny filoha teo aloha, Ravalomanana amin’ny nampifangaroany ny fitantanana firenena sy ny orinasany. « Rindrina efa simba ny teo ary lainga ny sary ahitana milina na fitaovana tao amin’ny ozinina tao amin’ny seranan-tsambo. Efa namidiny anefa izany… Nitsangana tsy ara-dalàna tao koa io orinasa io. Tsy nandoa hetra nanomboka ny taona 2008 koa izy nefa mitabataba », hoy ny ampahany amin’ny fanazavan’ny minisitra.Synèse R. L’article Minisitra Lalatiana Andriantongarivo: « Dimy taona no nifanomezana… tsy maintsy vita i Miami » a été récupéré chez Newsmada.
Fitsidihana ny distrikan’Andramasina: nihaino ny hetaheta sy namaha olana ny governora Rasoamaromaka
Betsaka ny fitarainan’ireo ben’ny Tanàna sasany sy ny mponina any amin ’ny distrikan’Andramasina tamin’ny fihaonan’izy ireo tamin’ny governora Rasoamaromaka Hery, afakomaly tany an-toerana. Eo ny fangatahana ny fanamboarana ny lalana, tena ratsy tokoa. Ny kianja maitso ao Ambohimiadana sy ny CSB II. Manampy izany ny fanarenana ny tranompokonolona ao Manjakavahoaka, efa simba sy tranainy. « Hojerena ny momba ireo. Efa nandinika ny fomba hanatanterahana izany ny teknisianina ka hamboarina ato ho ato », hoy ny governoran’Analamanga.Nanatitra ireo fanampiana avy any amin’ny filoha Rajoelina tany amin’iny faritra iny ny tenany sy ny ekipan’ny faritra. Nisy ny fanampiana ho an’ireo zokiolona, CSB II, « Matérnité », Akany mpitaiza kamboty, ary toeram-piofanana, kilasy mandry sy ireo marefo ara-pivelomana. Nahitana kidoro sy kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro (PPN), toy vary, siramamy, menaka, voamaina, savony. Anisan’ny nahazo izany ny « Maison Familiale Rurale Maroambika Antsahondra sy ny teny Ambohimiadana, Anosibe Trimoloharano ary nofaranana tany Sabotsy Mankakavahoaka.Synèse R. L’article Fitsidihana ny distrikan’Andramasina: nihaino ny hetaheta sy namaha olana ny governora Rasoamaromaka a été récupéré chez Newsmada.
CFM: “Mba hahay hifidy ireo mpifidy”
“Amin’izao ankatoky ny fifidianana loholona eto Madagasikara izao, manao antso avo izahay ato amin’ny CFM hitandroana ny fihavanana. Zava-dehibe ho antsika io fifidianana io, satria olon-dehibe ary ho mpikamban’ny andrimpanjakana mpanao lalàna eto amin’ny tany sy ny fanjakana no hofidina.” Io ny fanambaran’ny filohan’ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, amin’izao fiatrehana ny fifidianana loholon’i Madagasikara izao, izay nanomboka omaly ny fampielezan-kevitra amin’izany. Koa manantena izy fa ny fieritreretan’ny mpifidy vaventy no hamaritra ny safidin’izy ireo tsirairay avy. Hahay hifidy koa izy ireo, satria izay no lalàn’ny demokrasia.Ireo mpifidy vaventy no raiamandreny sy heverina ho olon-dehibe eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Koa antenaina ho vita ao anatin’ny filaminana ny fifidianana hatao amin’ny 11 desambra ho avy izao. Ao anatin’ny soatoavina maha Malagasy izany: ny fitandroana lalandava ny fihavanana. Ao anatin’ny firaisankina sy ny fitonian-tsaina ary ny fandriampahalemana no ahazoana miroso amin’ny asa fampandrosoana ho fanarenana ny firenena. Matoky sy mino ny CFM fa hiara-mientana sy hiray fo hampandroso ny firenena ny rehetra.R.Nd. L’article CFM: “Mba hahay hifidy ireo mpifidy” a été récupéré chez Newsmada.
Carolus Andriamahitsinoro : « C’était très dur car les Ivoiriens sont très à l’aise sur cette pelouse. Il a fallu se battre et je pense que ce score de parité arrange les deux équipes, car l’une équipe comme l’autre a tout juste besoin d’une victoire soit contre le Niger soit contre l’Éthiopie » Adrien Melvin : « Nous avons eu du mal à entrer dans le match, contrairement aux Ivoiriens qui se faisaient de plus en plus menaçants. Tout compte fait, ce résultat n’est pas si mauvais pour nous » Propos recueillis par Clément RABARY L’article Ils ont dit est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Ils ont dit a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Masoivoho amerikanina: manamarika ny herinandron’ny fanabeazana iraisam-pirenena
Nanomboka ny 16 ka hatramin’ny 20 novambra izao ny hanamarihan’ny masoivoho amerikanina ny “Herinandron’ny fanabeazana iraisiam-pirenena” (IEW).Mampirisika ireo mpianatra malagasy liana amin’ny fianarana any ivelany ny masoivoho amerikanina eto Madagasikara sy i Kaomoro handray anjara amin’ireo hetsika maimaimpoana mandritra ny IEW amin’ny fitsidihana ny pejy facebook https://www.facebook.com/EducationUSAMadagascar.Tokony hanararaotra ity herinandro ity ireo mpianatra malagasy hijerena ny fomba hahafahana manohy fianarana any amin’ireo oniversite sy ny toeram-pampianarana ambony miisa 4 000 any Etazonia ka hisitraka ny traikefa entin’ny fampianarana iraisam-pirenena.”Ny foara ampitain-davitra momba ny fampianarana ambony izay hatao ny 18 sy ny 19 novambra izao ny ivon’ny fanamarihana ny herinandron’ny fampianarana iraisam-pirenena na ny IEW amin’ity taona ity.Afaka mifandray amin’ireo tompon’andraikitry ny fandraisana mpianatra amina oniveriste sy ny sekoly ambony amerikanina toy ny Lafayette College sy ny Santa Rosa Junior College ireo mpianatra malagasy izay te handray anjara amin’ireo fotoana ireo.Ho an’ny eto Madagasikara manokana, hanolotra tafatafa mivantana amin’ny pejy “facebook” hiarahana amin’ny mpianatra efa nandranto fianarana tany Etazonia ny masoivoho amerikanina amin’ny alalan’ny EducationUSA.Tatiana A Fandaharam-potoana18 sy 19 novambra amin’ny 3 ora tolakandro sy amin’ny 7 ora hariva: Foara ampitain-davitra momba ny fampianarana ambony izay ahafahan’ny mpianatra mifandray amina oniversite amerikanina miisa 150. Misoratra anarana mialoha ao amin’ny pejy Facebook @EducationUSAAfricaConnection20 novambra – 11 ora : Andiany faharoa amin’ny tafatafa mivantana iarahana amin’ny ekipan’ny EducationUSA sy ireo mpianatra malagasy efa nandranto fianarana tany amin’ny oniversite amerikanina hitantara ny fiainan’izy ireo ao amin’ny pejy facebook @EducationUSAMadagascar.16 – 20 novambra: torohevitra samihafa momba ny fianarana any Etazonia, hozaraina isan’andro ao amin’ny pejy facebook @EducationUSAMadagascar L’article Masoivoho amerikanina: manamarika ny herinandron’ny fanabeazana iraisam-pirenena a été récupéré chez Newsmada.
Nomcebo teny Antsonjombe: nafana ny dihy sy ny hira “Jerusalema”
Rehefa tsy nahita fampisehoana an-tsehatra tao anatin’ny volana maromaro… Rehefa ela niandrasana ny tarika Nomcebo… Anjaran’Antananarivo indray ny omaly!Naverina indroa ny fihirana an’ny « Jerusalema », teny amin’ny Coliseum Antsonjombe Analamahitsy, omaly tolakandro. Amin’ny akoapobeny, io hira nohaingoana dihy mirindra io no tena nandrasan’ny maro tonga teny an-toerana, avy any amin’ny Nomcebo. Samy nanezaka ny hiaina tao anatin’ilay hira avokoa ny rehetra satria ny tompony mihitsy no nanao izany teny an-tsehatra. Tao ireo nifantoka tanteraka tamin’ny fandihizana fa tsy vitsy ihany koa ireo nanezaka mafy nihira ny « Jerusalema ».Na efa manana ny maha izy azy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena aza i Nomcebo Zikode sy ny zava-bitany, tsikaritra ihany fa somary vitsivitsy ny sanganasan’izy ireo hain’ny mpijery tonga teny amin’ny Coliseum Antsonjombe, hatramin’ny farany. Na izany aza, tsy nahasakana ny rehetra tsy handihy akory izany. Saika mihetsiketsika rahateo ny ankamaroan’ny hiran-dry zareo ireto.Raha tsiahivina, ankoatra ny maha mpamoron-kira sy mpihira azy, nandalina sy nianatra momba ny teknolojian’ny fanapariahana vaovao i Nomcebo Zikode. Manampy azy betsaka amin’ny fampahafantarana azy sy ny kanto ataony izany, raha ny fanazavany.HaRy Razafindrakoto L’article Nomcebo teny Antsonjombe: nafana ny dihy sy ny hira “Jerusalema” a été récupéré chez Newsmada.
Le By Pass – After work: hitondra ny vazony ny Lolo sy ny tariny
Mpanakanto manana ny lazany! Lolo sy tariny indray ny hanafana ny faran’ny herinandro, etsy amin’ny Le By Pass After work, rahampitso manomboka amin’ny 7 ora hariva. “Tady vita fato-maty”, “Ilay akanjo fotsy”, “Dimbaka avy any Nazareta”… Ireo ny sombiny amin’ny hira anisan’ny nanamarika an’ny Lolo sy ny tariny. “Manome sehatra ny mpanakanto, isam-bolana, ny Le By Pass After work, amin’ny fanehoana ny talentany. Anaty fahamatorana tanteraka izany. Hotanterahina avokoa ny zavatra nampanantenainay ho fanomezana fahafaham-po ny manakafy vazo malagasy”, hoy ny tompon’andraikitra.Tsy zovina amin’ny maro ny Lolo sy ny tariny. Anisan’ny nitondra fanabeazana sy fanovana toe-tsaina tamin’ireo tononkira tsara rafitra sy misy lanjany. Nitaiza na teny an-tsehatra na tany amin’ny haino aman-jery nandritra ny taona maro. Raha ny nambaran’ny tarika, tsy hanam-paharoa ity seho rahampitso zoma ity. Ao anatin’ny fampisehoana, hajaina hatrany ny fepetra ara-pahasalamana tsy hiparitahan’ny valanaretina Coronavirus.Narilala L’article Le By Pass – After work: hitondra ny vazony ny Lolo sy ny tariny a été récupéré chez Newsmada.